कतै बाल्यकालमा तपाई पनि यौन दुर्व्यवहार पर्नु भएको थियो कि ? – YesKathmandu.com
बिहीबार २५, कार्तिक २०७३
मनोज पण्डित,चलचित्र निर्देशक
बालकको बलत्कार ?
तपाई हामीले बालिका बलत्कार भएको वारेमा त सुनेका छौं तर बालक बलत्कारको बारेमा थाहै छैन । तर विश्वका हरेक ६ बालकमध्य एक जना बलत्कार हुने गरेको अत्यास लाग्दो तथ्यांक छ । त्यो पनि पुरुषबाटै बलत्कारको शिकार हुने गर्दछ बालक ।
यो जीवनको एकदमै सुक्ष्म पाटो रहेछ । मलाई लागिरहेको छ, अधिकांश मानिसहरु आफ्नो बाल्याकालमा विभिन्न किसिमका यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित छन् । तर यो विषयमा साच्चिकै संवेदनशिल भएर कहिलै लिएका छैनौं÷थिएनौं । त्यही घटनाहरुले हाम्रो जीवनको समग्र संरचना निमार्ण गर्दछ र मनोविज्ञानमा गभ्भीर असर पार्दछ । यो अत्यन्त जटिल कुरा हो । मलाई निर्माता पक्षले यो विषय दिदाँसम्म मैले कहिलै नजानेको÷नसुनेको पाटो थियो । कि एउटा बालक पनि बलात्कार हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा पुरुष बाटै । आफैलाई चुनौती दिन मन लाग्यो र यो कथा निर्माण भएको हो । ‘छायाँ’ सामाजिक घटनामा अधारित चलचित्र हो । यो चलचित्रमा हाम्रो समाजभित्र बालबलिका माथि कस्तो किसिमको छायाँ परिहेको छ भनेर देखाईएको छ ।
खोजी आफ्नो अस्तित्वको
सदैव ‘हिट’राजनीतिक चलचित्र निर्देशन गरेका पण्डित सामाजिक चलचित्र निर्देशनमा किन लागे ? भन्छन ‘राजनीति र कला मा धेरै अन्तर छ र फरक आयाम पनि । कलाको उद्देश्य समाज निर्माण गर्ने हो, समाज भित्रका मानविय संम्बेदनालाई उजागर गर्ने हो । तर राजनीतिले अर्कै पाटोलाई समेट्छ । त्यसैले मलाई आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्न मन लाग्यो । आफैलाई खोतल्ने प्रयत्न गर्ने सिलसिलामा यो प्रस्थान विन्दुको रुपमा चलचित्र छाँया बनेको हो ।’
राजनीतिक घटनाक्रममा बनाएका चलचित्रहरु साच्चिकै भन्ने हो भने उत्कृष्ठ होइन् । राजनीतिको आग्रह पूर्वआग्रहरुले मेरा महत्वकांक्षहरुले निमार्ण भएको चलचित्रहरु हुन । ति चलचित्र बाठो तरिकाले बनाए । तर ति चलचित्रमा गहन मानविय भाव बोकेर संम्बेदनशिल भएर बनाउन सकिन । यो मेरो आत्मा आलोचना हो । त्यसपछि जब मैले आफूलाई महत्व दिन थाले । फरक ढंगको चलचित्र बनाँउ भन्ने लाग्यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिस हो । त्यसैले मानिसका भावहरुलाइ महत्व दिन थाले त्यस पछि सामाजिक र मानवीय संम्वेदनाका विषय माथि काम गर्न सुरुवात गरे । छायाँ चलचित्र बधशाला र दाशढुंगा भन्दा धेरै पर र मेरो एकदमै नजिक छ । बधसाला र दाशढुंगा त्यो बेलाका ठूला राजनीति घटनाक्रमसँग जोडिएका थिए । छायाँ म सँग एकदमै नजिक छ ।
त्याग, परिश्रम नै ठूलो बजेट
मैले बनाएका चलचित्रमा सबै भन्दा ठूलो बजेट भनेको मेरो त्याग र परिश्रम हो । म महत्वकांक्षी मान्छे होइन । गरिबी अभाव के हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ । मैले बनाएका २ चलचित्रबाट मैले परिश्रमिक लिएर बनाएको होइनन् । ती चलचित्रहरुमा मेलै जुन परिश्रम, मेहेनत गरे त्यसको मुल्य त धेरै छ, तत्काल हिसावमा जोडिदैन । एउटा सफल चलचित्र बनाउनु चाहिने मुख्य कुरा कथा, निर्देशकको क्षमता, कलाकारहको आत्मा अनुभुति यी सबै कुराहरुमा एउटा निर्माताले अत्यन्त ठुलो भुमिका खेल्न सक्छ । त्यसपछाडिको भूमिका हुन्छ पात्र, कथाको विषय बस्तु र आईडिया यी सबै कुराको समग्र रुप बाट नै चलचित्र स्ट्रेन्थ निमार्ण हुन्छ ।
हरेक मानिस एउटा पात्र हो । र हरेक मानिस सँग द्धन्द हुन्छ, हरेक पात्र सँग द्धन्द हुन्छ । हरेक मानिसले आफ्नो द्धन्दसँग संघर्ष गरिरहेको छ । हरेका मानिसले जीवनमा खोज्ने भनेको खुशी, आत्मा सन्तुष्टि, उपलब्धि, जीवन जीउनुको अर्थको खोजी हो । द्धन्द र संघर्ष सँग गंसिएको पात्रको मनोविज्ञान हो । यी समग्रता भित्र गंसिएको पात्रको द्धन्द र संघर्षलाई मैले अत्यन्त महत्वपुर्ण मसनेको छु । र त्यो सँग गंसिएका पात्र, सोच र त्यसले निर्माण गर्ने संरचना महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।
मलाई लाग्छ हाम्रो चलचित्रहरुले हाम्रो वर्तमान हाम्रो आफ्नो भाषा खोजिरहेको छ, अस्तित्व खेजिरहेको छ । यसले शक्ति हाँसिल गरिसकेको अवस्था छैन । हामी बाल्यकालमा छौं । बच्चाले खोजिरहेको खेलैना जस्ता छौ । हाम्रो चलचित्र क्षेत्र अहिले जसरी बच्चाले खेलौना प्राप्त गर्न संघर्ष गर्छ त्यसरी नै संघर्ष गरिरहेको छ । मैले हाम्रो चलचित्रको अवस्थालाई बाल्यकालको अवस्थामा देखेको छु जो बोल्न सिक्दै छ, हिडन सिक्दै छ ।
ग्रेटर नेपाल,दासढुंगा,वधशाला जस्ता सफल चलचित्रका निर्देशक पण्डितसँग भरत रावलले गरेको कुराकानीमा आधारित
हेर्नुहोस छाँयाको ट्रेलर
भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा इटहरीमा विशाल प्रदर्शन